I-AutoKey: Ithuluzi lokuzenzekelayo eliwusizo le-GNU / Linux | Kusuka kuLinux
Ukufaka kwe-Linux Post | 25/08/2021 06:00 | Aplicaciones, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Uma kuziwa ukushintsha imisebenzi (imisebenzi noma izenzo) kukhompyutha, lokhu kuhlala kuhlose ukukhulisa i- ukukhiqiza wabasebenzisi. Futhi lapho laba basebenzisi bavame ukuthuthuka, njengasendabeni ye- Abaphathi Beseva, Abathuthukisi noma i-DevOps nokunye okuhlobene, ngoba izicelo zokukhiqiza zivame ukusetshenziswa. Njenge iziqalisi zohlelo lokusebenza unomusa Isipikishi o Ama-automator womsebenzi unomusa "Ukhiye wokuzenzakalela".
Endabeni ye- "Ukhiye wokuzenzakalela", kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi le ngu vula uhlelo lokusebenza ledeskithophu yomthombo esiza ukwenza imisebenzi eminingi ephindaphindwayo kalula futhi ngokushesha.
Ngaphambi kokuchaza "Ukhiye wokuzenzakalela" futhi uhlole ukuthi kanjani faka futhi usebenzise, njengokujwayelekile sizoshiya ngokushesha ngezansi, ezinye izixhumanisi ezihlobene ne- okuthunyelwe kwangaphambilini okuhlobene nezinye izinhlelo zokusebenza zokukhiqiza ebesike sakhuluma ngayo phambilini, ukuze kuthi ngemuva kokuphela kwalolu shicilelo babhekwe kalula:
"Ama-launcher wohlelo lokusebenza (ama-launcher) amathuluzi noma ama-complements esivame ukuwasebenzisa kuma-Operating Systems ethu ukwenza ngcono umkhiqizo wethu, ngokwandisa ubulula nesivinini sokusebenzisa ikhibhodi ukwenza izenzo. Isenzo esivame ukuba lusizo ikakhulukazi, lapho esikhundleni seDesktop Environment (DEs) sisebenzisa iMenenja yeWindow (WMs). Futhi phakathi kokuhle kakhulu esingakusho i-Ulauncher, okuyi-launcher yohlelo lokusebenza olusheshayo lwe-Linux. Kubhalwe ePython, kusetshenziswa i-GTK +." I-Ulauncher ne-Synapse: Iziqalisi ezi-2 ezihamba phambili zohlelo lokusebenza lwe-Linux
1 I-Autokey: Uhlelo lokusebenza lwe-Linux Desktop Automation
1.1 Yini i-AutoKey?
1.3 Kungani i-AutoKey uhlelo lokusebenza oluhle lwamaSysAdmins?
1.4 Ukufakwa nokusetshenziswa
1.5 Izithombe zesikrini
1.6 Ulwazi oluningi
I-Autokey: Uhlelo lokusebenza lwe-Linux Desktop Automation
Ngokusho kwe- Iwebhusayithi esemthethweni ye- "AutoKey" ku-GitHub, lolu hlelo lokusebenza luchazwe kafushane ngale ndlela elandelayo:
"Kuyinsiza ezenzakalelayo yedeskithophu yeLinux neX11."
Futhi bengeza nokuthi:
"Njengamanje isebenza ngaphansi kwePython 3. Futhi ngoba uhlelo lokusebenza lwe-X11, ngeke lusebenze ngo-100% ekusatshalalisweni kwe-GNU / Linux esebenzisa iWayland ngokuzenzakalela esikhundleni seXorg."
Inikeza isikhombimsebenzisi esibonakalayo esilula futhi esibonakalayo esisebenzisa imibhalo ye-Python-3 futhi esenza ukunwetshwa kombhalo, ngokugxila okukhethekile ekusebenzeni kwe-macro ne-keystroke.
Ingasetshenziselwa ukunwetshwa kombhalo okulula ngokusebenzisa i- "Phrases". Ngokuphathelene nezinqamuleli zekhibhodi (isb. [Ctrl] + [Alt] + F8), yokwandisa imishwana.
Ivumela, uma kunesidingo, ukusebenzisa wonke amandla olimi lwezinhlelo zePython ukubhala amaSkripthi kuPython3 ukwenza imisebenzi edingekayo. Imibhalo ye-AutoKey efana nemishwana ingaxhunyaniswa nezifinyezo nama-hotkey, phakathi kwezinye izinto, ukwenza imiyalo.
Inikezela nge-API yokusebenzisana nesistimu, yenza izinto njengokuchofoza igundane noma ukuthayipha umbhalo ngekhibhodi.
Kungani i-AutoKey uhlelo lokusebenza oluhle lwamaSysAdmins?
Kokubili okuhle Ama-Sysadmins Njengabanye ochwepheshe be-IT abaphambili, bavame ukuba nokuqonda okuyisisekelo kwe- uhlelo noma logic yohlelo. Ngakho-ke, phakathi kwezinto eziningi, bavame ukuba nokuqonda okuhle kakhulu kokusebenza / ukusebenza kwemishini / amadivayisi ahlukahlukene nesoftware ehlobene nayo, ukuze kuqaliswe futhi kusombululwe izinkinga.
Kepha futhi, zivame ukuba zinhle kokuhlukahlukene izilimi zokuhlela esetshenziselwa ukubhala noma ukwenza imisebenzi ejwayelekile efana ne- Igobolondo, i-AWK, iPerl, iPython, phakathi kwabanye. Konke ukuze uguqule ngangokunokwenzeka, ufunde okuhle kakhulu ukubhala izilimi nemiyalo, ukuguqula imisebenzi ejwayelekile futhi eyisicefe ibe imisebenzi ezenzakalelayo.
Ukulanda, ungalanda ifayela le- Amafayela we-3 ngefomethi ye-.deb kunesidingo futhi kuyatholakala esigabeni sakho sokulanda, esihambisana nesokugcina sakho inguqulo yamanje (0.96 beta-8), Bese uwafaka kufayela lakho le- I-GNU / Linux Distro, njengoba kunjalo nakithi. Kodwa-ke, womabili (amaphakheji we-gtk ne-qt) noma i-1 eyodwa kuphela kwezingu-2 angafakwa njengoba kudingeka.
Ngemuva kokulanda kufayela le- Landa ifolda, okulandelayo kungenziwa esigungwini uku-oda:
Bese uyigijime nge- Imenyu Yezicelo bese uhlela a ibinzana noma iskripthi usebenzisa i- Ulimi lwePython. Mina, hlela lo msebenzi olandelayo: Qalisa umdlalo Ukwesaba Emadolobheni 4 ngokhiye Ctrl + 4. Isenzo esenziwa ngaphambilini ngesandla ngokuvula isiphequluli, ukusesha ifolda yomthombo waso nokuchofoza kufayela elisebenzisekayo.
Ikhodi yePython ihlelwe
Ngeminye imininingwane nge "Ukhiye wokuzenzakalela" Sincoma ukuhlola izixhumanisi ezi-3 ezilandelayo:
Usizo Oluku-inthanethi: I-AutoKey
IGitHub Wiki: I-AutoKey
Ikhodi yeGoogle: I-AutoKey
Ngokufingqa, njengoba sekubonile "Ukhiye wokuzenzakalela" ilusizo kakhulu ithuluzi lokuzenzekelayo lomsebenzi, esebenza futhi ngokusebenzisa i Ulimi lwePython. Futhi uma isetshenziswe kahle, ingaba ithuluzi eliguqula ukuthuthukisa indlela yethu ye- ukukhiqiza noma umane usivumele ukuthi sinciphise ukucindezelwa ngokomzimba okuhambisana nokubhala. Ngaphezu kwalokho, kungaba uhlelo lokusebenza oluhambisana futhi oluhambisanayo lokuthi yini nge Isikripthi se-Shell bekungekho okusebenzayo noma okungenzeka ukuzenzekelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-AutoKey: Ithuluzi lokuzenzekelayo eliwusizo le-GNU / Linux
I-pCloud Drayivu: insizakalo yokugcina ifu yesikhulumi